कस्तो अचम्म ! ७० वर्षका बुढा बा मात्र १२ के जी छन् ,छोरोले काखमा बोकेर हिंड्छन् (भिडियो हेर्नुस्) -
Home News कस्तो अचम्म ! ७० वर्षका बुढा बा मात्र १२ के जी छन्...
कस्तो अचम्म ! ७० वर्षका बुढा बा मात्र १२ के जी छन् ,छोरोले काखमा बोकेर हिंड्छन् (भिडियो हेर्नुस्)
उनी अर्घाखाँचीमा जन्मिएका हुन । आफ्ना बाबू ज्वतिष भएकाले आफुले पनि त्यही कुरामा रुचि राखेर ज्वतिषशास्त्र पढ्ने आफ्नो इच्छा भएको उनी बताउँछन ।
तर कक्षा पाचँ पढेर ६ कक्षामा पढ्ने बेला करिव २२ दिनसम्म ज्वरो आएर निको भए पछि हात खुट्टा दुख्न थालेको उनको भनाई छ । त्यतिबेला जाने जति र भए जति सम्पुर्ण आयुर्वेदिक उपचार देखि लिएर धामीझाँक्री इत्यादी सबै गर्दा पनि आफुलाई ठिक नभएर आफू हिडडुल गर्न नसक्ने भएको उनले बताए
Previous articleबुहारीले सासुलाई कोसँग सु तेर छोरो जन्माइस् भनिन् ,छोरोले र गतको आँ सु रु वाए आमा बुबालाई (भिडियो हेर्नुस्)
Next articleश्रीमान घर फर्किदा श्रीमती ड्राइभरसँग टा प भएपछि श्रीमानले यस्तो ध म्कि दिए दुवैजनालाई (भिडियो हेर्नुस्)